IT / Software in Computer / IT in Yangon Region
Updated at: 25 November 2017
Application Deadline: 23 January 2017
-	Company၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို မော်တော်ယာဉ် (Light Truck) ဖြင့် မြို့တွင်း၊ မြို့ပြင် အန္တရာယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင်ပို့ဆောင်ပေးရမည်။
-	အခြေခံပညာ အထက်တန်းအထိ ပညာသင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ -	ယာဉ်မောင်းအတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်နှင့် အထက် ရှိရမည်။ -	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး လူအများနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ -	အသောက်အစားကင်းရှင်းပြီး ရိုးသားသူဖြစ်ရမည်။ -	မော်တော်ယာဉ်အကြောင်း ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပြီး မြို့တွင်းလမ်းကြောင်းများ ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။
Access Spectrum isaleading technology solutions provider and distributor, offeringaspectrum of products, services and turnkey solutions. We provide innovative information and Communication Technology (ICT) solutions for our customers to be successful in planning, employing and managing their IT infrastructure. Enterprise IT products, Data Center, Power & Cooling, and Network & Security solutions are one of our strengths, transforming, enhancing and protecting our customers’ valuable investment on the information systems and data, which is vital to their organizations. Managing the ICT infrastructure from the business perspective becomes one of the core factor to successful integration of information & communication technology. In order to meet the new challenges of Cloud, Mobility & Security. Our approach is to help organizations plan, deploy and support in digital transformation with the future oriented approach to embrace Cloud, Mobility & Security.
Access Spectrum Co., Ltd သည် မြန်မာပြည်ရှိ IT လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပြီး Enterprise Datacenter and Network Solution လုပ်ငန်းများအတွက် အဓိကဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Access Spectrum မှ တင်သွင်းသော Allied Telesis switch, ATEN LCD KVM, AV Extender, Neuro Power UPS, EnGenius wireless Network Products, SJ Rack Enclosure, X-Mini speaker များ, Dell နှင့် HP Branded Enterprise Desktop, Laptop, Server များ, Firewall / Security products များ, WAN Acceleration နှင့် Optimization product များအစရှိသည်တို့ကို Customer စိတ်တိုင်းကျ ရောင်းချဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း ၊ Helpdesk / Wireless Solution, Enterprise Network / Security Solution, Digital Surveillance Solution, Datacenter Solution for Corporate, Campus, Hospital, Hotel wifi Hotspot Solution, WAN Optimization Solution, Virtualization Solution, SAN solution, Video Conferencing Solution နှင့် Server Advanced Clustering Solution တို့ကို Customers များ၏ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက် အရ End to End စိတ်တိုင်းကျ ဝန်ဆောင်မှုပေး လျှက် ရှိပါသည်။